श्रीमान बिदेश भएको मौ’का छो’पी श्रीमतीलिएर फ’रा’र भए छिमेकी दाइ( भिडियो हेर्नुहोस्) – Dainik Sangalo
श्रीमान बिदेश भएको मौ’का छो’पी श्रीमतीलिएर फ’रा’र भए छिमेकी दाइ( भिडियो हेर्नुहोस्)
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आश्विन १९, २०७८ समय: १५:५३:१२
झापा चारपाने घर भइ बसोबास गर्दै आइरहेकी माया महराका चुडामणी महरा नाम गरेका उनका श्रीमानले आफ्नै छिमेकी भाइ मदन चौहानकि रुपा लिम्बू नाम गरेको श्रीमतीलाइ भ’गा’ए’का छन । मदन भने अहिले बिदेशमा रहेको कुरा पनि बाहिरिएको छ । बिगत तीन दिनदेखि उनिहरु दुबैजना बे’प’त्ता छन । माया महरा भने अहिले ठुलो बि’प’त’मा छिन, दुई छोराछोरीकि आमा उनका श्रीमानले यसो गरिदिदा उनी म’र्नु न बा’च्नुको अबस्थामा छिन ।
श्रीमतीले भने प्रहरीमा उजुरि पनि दिइसकेकि छिन । १५ लाख ऋण भएको अबस्थामा उनका श्रीमान भने बैंकबाट ५ लाख लिएर फ’रा’र भएका छन । उनिहरु दुइजनाबिच फोनमा कुराकानी भने हुनेगरेको उनले बताइन तर साथिसग बोलेको भन्दै बोल्ने गरेका रहेछन उनी । केही बोल्यो भने कु’टि’हा’ल्ने गरेको बताइन उनले ।
बिगत १ बर्षदेखि उनको पुरै बानीब्यवहार पनि परिबर्तन भएको कुरा पनि उनले बताइन । राती अबेला घर आउने, अनेक अ’श्ली’ल शब्दहरु प्रयोग गरेर गा’ली गर्ने गरेको कुरा पनि उनले बताइन । बिदेशमा हुदापनि कहिल्यै राम्रो शब्द नगरेको बताइ उनले । जा’ड खाएर माइतीमा समेत झ’ग’डा गरेका रहेछन उनले ।
अनेक तरहका भएका नभएका आ’रो’प लगाउने अनि शं’का गर्ने गरेको बताइन उनले । उनले श्रीमानको फोटो पनि सार्बजनिक गरिन । उनी भन्दा पहिले नै ३ वटासग बिबाह गरिसकेका रहेछन उनले । ३ जनाको जिन्दगी बर्बाद गरेर फेरिपनि उनी अर्कि महिलालो जिन्दगि ब’र्बा’द गर्न तम्सिरहेका छन ।
क’ठै छोरीले थाम्न सकिनन आँसु । बाबा फिर्ता आइदिनु भनिन । श्रीमतीलाई त घृ’णा गर्थे तर यति सानी छोरिको के दो’ष ? किन सोचेनन उनले आफ्नो सन्तानको बारेमा ? सम्बन्धित निकायको यो विषयमा ध्यान जाओस ।बाकी हेर्नुहोस तलको भिडियोमा
Last Updated on: October 5th, 2021 at 3:53 pm